Ndeapi mabhenefiti eCDD? | Yakanakisa Hutano Sarudzo ye2020
Zvakanakira CBD Mafuta
Zvakawanda Zvakanakira CBD Mafuta Akatsigirwa Neuchapupu
Cannabidiol kana CBD sekuzivikanwa kwayo zviri nani chinhu chakakurumbira mazuva ano. Zvakanakira https://trytranquil.net/product/cbd-roll-on/ akawanda kune akawanda akajairika zvirwere. CBD ndeimwe yeanopfuura zana cannabinoids inowanikwa mu Cannabis sativa zvirimwa.
Tetrahydrocannabinol (THC) ndiyo inonyanya kushandisa psychoactive cannabinoid inowanikwa mu cannabis, ndicho chinhu chikuru chembanje uye chinokonzera kunzwa kwekukwira. Kusiyana neTC, CBD haisi psychoactive. Hunhu uhu hunoita kuti CBD ive sarudzo inokwezva kune avo vanotsvaga zororo pasina zvinokanganisa mbanje. CBD oiri inogadzirwa nekubvisa iyo CBD kubva kune cannabis zvirimwa, wozoisanganisa nemafuta anotakura senge coconut kana hemp mbeu yemafuta.
CBD inoderedza marwadzo: Mumuviri wemunhu, pane hurongwa hunodaidzwa kuti Endocannabinoid system, iyo inogadzirisa mabasa akati wandei anosanganisira kudya, kurara, uye immune system mhinduro. Muviri unoburitsa maurotransmitter anonzi endocannabinoids ayo akabatana neacannabinoid receptors muhurongwa hwekutya. Zvinoenderana nekutsvaga, CBD inobatsira kudzikamisa kurwadziwa kusingaperi nekukanganisa zviitiko zvema endocannabinoid receptors kudzikisira kuzvimba nekudyidzana nemaurotransmitter.
CBD inogona kudzora kushushikana uye kushushikana: Kushushikana uye kushushikana zvinowanzo kurapwa nemishonga, izvo zvinogona kukonzera huwandu hwemhedzisiro kusanganisira kushushikana, kukotsira, kusagadzikana pabonde, kushaya hope, uye kutemwa nemusoro. Zvinogoneka kuti https://trytranquil.net/product/cbd-roll-on/ oiri inogona kuve kurapa kwekushushikana nekushushikana, ichipa avo vanorarama nezvinetso izvi mukana wekuwana mhinduro yepanyama. CBD inogona kushandiswa kurapa kushaya hope uye PTSD. Aya mabhenefiti e CBD mafuta akabatana nekugona kweCBD yekuita pane zvinogamuchirwa zve serotonin, iyo neurotransmitter iyo inodzora manzwiro uye hunhu hunhu.
CBD Inogona Kuva Neeuroprotective Properties: Masayendisiti anotenda kuti rimwe remabhenefiti eCDD oiri nderekuti kugona kuita pane endocannabinoid system kunogona kubatsira kune vanhu vane chirwere chetsinga. Chaizvoizvo, kumwe kwekutsvagisa kunoshandiswa kweCDD pakurapwa kwehuropi kusagadzikana senge pfari uye yakawanda sclerosis. Kunyangwe hazvo zvidzidzo mundima iyi zviri zvitsva, ongororo dzinoverengeka dzakaratidza mhedzisiro inovimbisa. Zvakangodaro, zvakakosha kutaura kuti vamwe vanhu muzvidzidzo izvi vakasangana nemhedzisiro inosangana nayo CBD kurapwa, zvakadai sefivha, kuneta, uye kugwinha. CBD uye Delta 8 THC muBulk yakave zvakare yakadzidziswa nezve kwavo kugona zvivakwa mukurapa mamwe akati wandei kusagadzikana kwetsinga.
CBD Inogona Kuderedza Zviratidzo Zvinoenderana neCancer: Imwe yemakakatanwa anonzi mabhenefiti eCDD mafuta ndeyekuti inogona kubatsira nezviratidzo zvine chekuita nekenza. Chii chiri chokwadi, zvakadaro ndechekuti CBD inogona kubatsira vanhu vanotambura nekenza kubata mhedzisiro inosangana neyekurapa kenza, senge kusvotwa, dzungu, uye kurwadziwa. Zvinonzi CBD inogona kuve nekenza-yekurwisa zvivakwa. Nekudaro, hapana humbowo hweizvozvo. Kumwe kutsvagurudza kwaizodikanwa kuratidza kushanda kwayo.
CBD Inogona Kubatsira Kuderedza Acne: Acne chirwere cheganda chinokanganisa vakatenderedza gumi muzana yevagari. Izvo zvinokonzerwa nezvakasiyana zvinhu, mabhakitiriya, kuzvimba kwedermis, kuwedzeredza kwe sebum, uye kunyangwe genetics. Sekutsvagurudza kwazvino kwesainzi, imwe yemabhenefiti e CBD mafuta ndeyekuti inogona kubatsira kurapa acne nekuda kweayo anti-anogumbura zvivakwa uye kugona kudzikisira kugadzirwa kwe sebum.
CBD Inogona Kubatsira Pamwoyo Hutano: Ongororo dzichangobva kuitwa dzakabatanidza CBD nezvakanaka zvinoverengeka zvemoyo uye kutenderera kweropa, kusanganisira kugona kudzikisa BP. Kuwedzera kweropa kwakabatanidzwa nenjodzi dzakakwira dzemamiriro emwoyo, kusanganisira sitiroko uye chirwere chemwoyo. Kutsvagisa kunoratidza kuti CBD inogona kubatsira neakakwira BP.
Zvimwe Zvakanakira Kubatsira kweCBD Oiri: Kunyangwe hazvo kutsvagurudza kuchidikanwa, CBD inogona kupa mamwe mabhenefiti.
Kurapa pakurwisa zvinodhaka: CBD inofungidzirwa kuti inoshandura matunhu ehuropi ane chekuita nekupindwa muropa nezvinodhaka.
Antipsychotic mhedzisiro: CBD inogona kubatsira vanhu vane schizophrenia uye kumwe kusagadzikana kwepfungwa uye kudzikisira zviratidzo zvepfungwa.
Kudzivirira chirwere cheshuga: Mune zvidzidzo nemakonzo, CBD yakadzora chiitiko cheshuga neanopfuura makumi mashanu muzana.
NextNext mumhanyi;CBD uye Chirwere cheshuga - Uchishandisa CBD Oiri Kudzosera Ropa Shuga | Chigadzirwa chakanakisa 2021